Imagen: Mitahiry, mitantana ary mandrindra ny atiny horonantsary sy haino aman-jery manan-tantara ao amin'ity DAM mailaka | Martech Zone
Imagen: Mitahiry, mitantana ary mandrindra ny atiny horonantsary sy haino aman-jery manan-tantara ao amin'ity DAM mailaka ity
Alakamisy 18 martsa 2021 Alakamisy 18 martsa 2021 Douglas Karr
Fitantanana ny fananan'ny nomerika (Dam) efa an-dasa efa ho folo taona izao ny sehatra, ahafahan'ny orinasa lehibe mitahiry, mitantana, mandrindra ary mizara ny rakitra media manan-karena neken'ny marika. Ity misy horonantsary manazava tsara momba ny fomba hanampian'ny Imagen ny marika hiditra tsara sy hitantana ny fananany:
Imagen dia manolotra vokatra DAM roa:
Sehatra fitantanana fananana dizitaly mailamailaka hitehirizana sy handaminana ny horonan-tsary sy ny atiny media manankarena rehetra. Azo idirana lavitra avy amin'ny fitaovana mifandraika aminao mba hametahana marika, hizarana, hanamarihana ary maro hafa.
Ny endri-javatra Imagen Go dia misy:
Storage - tarihino sy alatsaho ny fampidinana rakitra na fampirimana avy amin'ireo fitaovana mifandray aminao izay ahafahanao mametaka, manome an-tsoratra ary maro hafa.
Mitady - fikarohana haingana sy marina izay manampy ny ekipa mpamorona anao na ny mpanjifanao hahita mora foana ny fananana tadiaviny.
Fanondroana mandeha ho azy - mandany fotoana kely kokoa amin'ny tagging AI izay manamora ny fitadiavana ny atiny amin'ny fikarohana teny lakile tsotra.
fiaraha-miasa - Asao ny ekipa hiara-hiasa, handinika, hampandre, ary hanaiky ny atiny. Azonao atao koa ny manisy marika ny faritra manokana amin'ny horonan-tsary sy sary.
Ahenao ny enta-mavesatra amin'ny fitantanana rakitra, ampiasao amin'ny fomba mahomby kokoa ny fananana, alefaso haingana kokoa ny fampielezan-kevitra, ary hiantohana ny tsy fitovizan'ny marika.
Fitsarana maimaimpoana ho an'ny Imagen
Mifantoka amin'ny orinasam-panatanjahantena sy haino aman-jery, Imagen Pro dia sehatra fitantanana horonantsary manan-tsaina izay manampy anao handamina ny atiny sarotra, hametraka anao amin'ny fifehezana mafy. Tehirizo, tadiavo, zahao, zarao ary tantano amin'ny fomba mora ny atiny, ary sokafy ny sanda, manomboka amin'ny marikao ka hatrany ambany.
Imagen Pro dia manasongadina:
Fivarotana - Lahatsary, sary, raki-peo, antontan-taratasy, ary lahatsoratra media sosialy dia voatahiry azo antoka, azo alaina mora foana.
Find - Midira mora foana amin'ny arisivan'ny fampitam-baovao. Ny fitaovana enti-miasa intétiitive sy fitantanana dia midika fa voarindra, voatanisa ary vonona hilalao ny portfolio-nao.
View - Imagen Pro dia mifanaraka tsara amin'ny orinasanao. Manatsara ny traikefan'ny mpampiasa ho an'ny mpihaino anao manokana. Ataovy miavaka ny sehatra, miteraka fidiram-bola ary manatsara ny famerenam-bola amin'ny arisivanao.
mitantana - Vohay amin'ny alàlan'ny fitaovana fitantanana manan-talenta izay ahafahanao mifehy, mandamina, mizara, mamakafaka ary manangona ny arisivanao.
Zarao - Na mijery fangatahana fangatahana mivantana na mivantana ianao na mandefa rakitra vonona amin'ny fampielezam-peo dia mampifandray ny mpihaino anao amin'ny votoatiny ilain'izy ireo ny Imagen Pro - amin'ny hafainganam-pandeha haingana indrindra.
Imagen koa dia manolotra manan-karena manan-karena API hampiditra tanteraka ny vokatr'izy ireo ao amin'ny sehatry ny orinasanao.
Tags: tohodrano mailakaaifanamarihana mandeha ho azyautotagautotaggingtohodranon'ifitantanana fananana nomerikaImagensary an-tsaina mandehasary profitantanana harena manankarenahaino aman-jery fanatanjahan-tenafitantanana ny fananana horonantsary
Maninona ny masontsika no mila skema fandokoana miloko mifameno… Ary aiza no ahafahanao manao izany